Naphezu kokuthi ibhizinisi lihlelwe ngenzuzo, ngokuvamile ukungaqiniseki kwemakethe noma ukungabi nokuphathwa okuphumelelayo kubangelwa ukulahlekelwa yenkampani. Lesi simo singabizwa ngokuthi siyingozi, ikakhulukazi ekuqalekeni kwamabhizinisi asebhizinisi, ngoba ukulahlekelwa kusho ukulahleka kwemali kumtshalili, okuyinto ebuhlungu njalo. Ukungathandi ukuhlukanisa ngezimali zabo siqu futhi kuchaza ukunakekelwa ukuthi abaphathi benkampani ngokuvamile bahlinzekela ukulahlekelwa. Omunye angasho ngisho ukuthi ukuvimbela inkampani ukungena "endaweni engafanele" yiyona nto ebaluleke kakhulu kwinqubomgomo yalo yokuthengwa kwempahla, futhi ithuluzi eliyinhloko le nqubomgomo yikubalwa kwephuzu-iphuzu.
Naphezu kokubaluleka okukhulu ukuthi iphuzu-iphuzu ngisho nelokwakha ekuthatheni izinqumo zokuphatha, ukubala kokubala-ngisho nokubala kulula. Konke okudingeka ukwenze ukuhlukanisa izindleko zakho zibe ezihleliwe neziguquguqukayo. Ngokomkhuba wendabuko kufaka zonke izindleko ezingahlotshaniswa nokwanda noma ukunciphisa ivolumu yokuthengisa kwakho. Kungaba yini? Eqinisweni, i-spectrum yezindleko ezihleliwe zikhulu kakhulu. Lona ukuqashiswa kokusebenzisa ihhovisi, nokugqoka nokukhwabanisa kwemishini kanye nomholo kumphathi, kanye nezindleko ezihlobene nokubuyiswa kwemali mboleko. Ungasho ukuthi lezi izindleko "zilenga" enkampanini, futhi uma ingathengisi, ngokuqinisekile izobala ukulahlekelwa.
Ezindleko eziguquguqukayo yizinto ezihlobene ngqo nokuthengisa. Lokhu-ke, izindleko zempahla eluhlaza kanye nezinto zokwakha, kanye nokukhokhwa kwekhomishini kubathengisi kanye nezindleko ezihlobene nokuthutha kwemikhiqizo eqedile. Ngayo yonke imithetho ye-logic, izindleko ezinjalo ngeyunithi yomkhiqizo kufanele zibe ngaphansi kwentengo yayo. Ngakho-ke, uma uthengisa kakhulu, izindleko ezengeziwe zizoba, kodwa inzuzo eyengeziwe iyoba.
Emva kokuhlukanisa izindleko ngamaqembu, ungakwazi ukubala ngokuqondile i-break-even point. Ukuze wenze lokhu, hlukanisa zonke izindleko zakho ezihleliwe ngemali etholakala ekuthengisweni kweyunithi eyodwa yomkhiqizo, ngaphansi kwezindleko eziguquguqukayo zokukhiqizwa nokuthengiswa kwayo. Isibonelo, umkhiqizo ubiza ama-ruble angu-100, kodwa izinto zokusetshenziswa, umholo kumaseli, njll. Ingabe ama-ruble angu-60. Khona-ke ukudayiswa kweyunithi ngayinye yomkhiqizo kuzokhokha ama-ruble angu-40 wezindleko ezihleliwe. Ake sithi zilingana nama-ruble angu-4000. Kulesi simo, udinga ukukhiqiza nokuthengisa izingxenye eziyi-100 zokukhiqiza, ukuze inzuzo yakho ilingane. Lona iphuzu-iphuzu.
Ukuphumula-ngisho nokubala kungenziwa futhi ngemali. Sandisa umphumela esiwatholile ngaphambili ngentengo futhi sithole ukuthi kufanele sithole ama-ruble angu-10 000 ngenzuzo ukuze sifinyelele iphuzu eliphuthumayo.
Kulezi zinkomba ezitholiwe ngokuqhubekayo kuyadingeka ukuba ziqondiswe ngokuhlela amanani amaningi okuthengisa. Kuyiqiniso ukuthi kuphakanyiswa ukuthi ezinhlelweni zakho kukhona isibalo esingaphezu kwephuzu-iphuzu. Akuyona inani elihleliwe, lizinga elingaphansi ngezansi lapho ibhizinisi elingenalo ilungelo lokuhla. Uma ufuna ukubala inani elihleliwe lokuthengisa, bese ufaka inzuzo elindelekile ekubalweni izindleko eziqhubekayo. Umphumela uzoba ukuthengiswa kwakho okulindelekile.
Ukubalwa kwephutha-ngisho nokukhomba, phakathi kwezinye izinto, kukuvumela ukuthi unqume ukuzinza kwezimali komkhankaso. Uma izindleko ezihleliwe ziyingxenye enkulu yezindleko, ibhizinisi elinjalo liyingozi kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo kungase kube nenzuzo xaxa lapho ukwandisa inani lokuthengisa. Kodwa-ke, inothi ukuthi ibhizinisi elinesabelo esiphezulu sezindleko ezihleliwe kufanele sigcine ukuthengisa ezingeni elikhulu kakhulu kunephuzu-ngisho nephuzu, ngaphandle kwalokho imiphumela engavamile ayikwazi ukugwema.
Iphethini izimbuzi. Indlela thunga ithoyizi ngezandla zabo. ekilasini Master
Sikadali e multivarka. Yini kungaba lula?